Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း)
Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
နေထိုင်မှု ပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
နာမည်ပေးထားသလိုပဲ ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်း အောင့်ခြင်းဆိုတာ ခေါင်းကိုက်သလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်နာကျင်တတ်ပြီး ပျို့ချင်အန်ချင်တာ၊ ကြွက်တတ်တာ၊ အန်တာ အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် မိုင်ဂရိန်းရောဂါ ရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ရှိမယ်ဆိုရင် မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်း အောင့်ခြင်း (ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်း) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်း ရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ မိုင်ဂရိန်းခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးတွေ၊ လေးဖက်ထောက်စ ကလေးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ နဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ် တွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်း ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ မိုင်ဂရိန်း ဝေဒနာအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာ ဆိုရင် ပြင်းထန်တဲ့ ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်း ကမိုင်ဂရိန်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အစာအိမ်မိုင်ဂရန်း လို့လည်း ရံဖန်ရံခါ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းကို လူကြီးတွေမှာ စမ်းသပ်မတွေ့ရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူကြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေ က ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်း ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ခံစားရတဲ့ အခါ တခြား ဖြစ်နိုင်ချေ ရောဂါလက္ခဏာတွေ (ဥပမာ – နာတာရှည် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ၊ reflux ၊ lactose intolerance) ကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားပါတယ်။
Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လေ့လာချက်တချို့ကတော့ ကလေးငယ် ၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိဟာ ကလေးဘဝမှာ ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်းကို ခံစားရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်း ရှိတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိသားစုရာဇဝင်မှာ မိုင်ဂရိန်း ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ရောဂါ ရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းရောဂါရဲ့ ကေ့စ် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်မှာ မိသားစုအတွင်း မိုင်ဂရိန်း ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းရင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ မူးဝေအော့အန်တတ်တဲ့ ရာဇဝင်ရှိနေတတ်ပါတယ်။
Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကနဦးလက္ခဏာတွေကတော့ ခန္ဓါကိုယ်အလယ်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းဗိုက်အောက်ခြေနား တစ်ဝိုက် နာကျင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်တွေကတော့ midline abdominal pain လို့ခေါ်တတ်ပါတယ်။ တခြား လက္ခဏာတွေ ကတော့-
သန်းဝေနေ၊ အိပ်ချင်နေမယ်၊ အားကုန်နေမယ်
မျက်တွင်းကျပြီး မျက်လုံးအောက်တွေမှာ အနက်ရောင်အရိပ်တွေ ဖြစ်နေမယ်
ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းက ပြင်းထန်ပြီး ကနဦးလက္ခဏာတွေ မပြပဲ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ထဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်နာရီ၊ အများဆုံး ၃ ရက် လောက်ကြာပြီးတဲ့ အခါ နာကျင်မှု ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။
အစောပိုင်းစမ်းသပ်ကုသတာက အခြေအနေပိုဆိုးမလာအောင်၊ တခြားအရေးပေါ်အခြေအနေတွေ မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ပဲ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။ ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ ဘာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အသင့်လျော်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းကို ဘာကဖြစ်စေသလဲဆိုတာကို တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး။ သီအိုရီတစ်ခုအရဆိုရင် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းက ဒြပ်ပေါင်း ဟာစတာမိုင်း နဲ့ ဆီရိုတိုနင် တို့ရဲ့ ပမာဏတွေ ဟာ ပြောင်းလဲသွားမယ် ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ စိတ်အလိုမကျဖြစ်တာ၊ ပူပန်သောက ရောက်တာတွေကလည်း ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းကို ဖြစ်စေတယ် လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ချောကလက်၊ အချိုမှုန့်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ နဲ့ နိုက်ထရိတ် ဓါတ်ပါဝင်တဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ အသားတွေကလည်း ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လေအမြောက်အမြား မျိုချမိခြင်းကလည်း တူညီတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ်တာနဲ့ အစာစားရာမှာ ခက်ခဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါအခြေအနေကို ကြုံတွေ့နေရမယ် ဆိုရင် ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရန်း ဖြစ်ဖို့ အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းဖြစ်တဲ့ ကလေးအများစုရဲ့ မိသားစု ရာဇဝင်မှာ မိုင်ဂရိန်း ရောဂါ ခံစားရသူ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကလေးအများစုဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ မိုင်ဂရိန်း ရောဂါ ခံစားဖို့ အခြေအနေ ပိုများပါတယ်။
Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရန်း နဲ့ ပုံမှန် ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၊ stomach flu ဒါမှမဟုတ် အစာအိမ်၊အူ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြား ပြဿနာတွေ ကို ခွဲရခက်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းက မိသားစု အတွင်းမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိသားစုရာဇဝင်မှာ မိုင်ဂရိန်း ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ရှိ၊ မရှိကို ဆရာဝန်က မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။
ဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အခြား အကြောင်းရင်းတွေကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ကလေးဆီမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဝမ်းဗိုက် မိုင်ဂရိန်းရဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ဘယ်လောက်တူနေမလဲ ဆိုတာ အသေးစိတ်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းရှိနေပြီလို ဆရာဝန်က သံသယ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်စ်ရေး ဒါမှမဟုတ် အာထရာဆောင်း ရိုက်ရပါလိမ့်မယ်
Abdominal Migraine (ဝမ်းဗိုက်တစ်ခြမ်းအောင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ဘာက ပြဿနာ ဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို သိရင် ကုရတာပိုလွယ်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်း ရောဂါအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာမသိရသေးပေမယ့် ဆရာဝန်တွေကတော့ တခြား မိုင်ဂရိန်းရောဂါတွေလိုပဲ ကုတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာတွေ အခြေအနေ ပိုမဆိုးလာသရွေ့တော့ ဆေးမညွှန်းပေးပါဘူး။ rizatriptan (Maxalt) နဲ့ triptans လို့ခေါ်တဲ့ sumatriptan (Imitrex) စတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ကလေးတွေ အတွက် သောက်သုံးခွင့်မပြုပါဘူး။ အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ ကလေးတွေကတော့ sumatriptan ကို နှာခေါင်းဖြန်း စပရေး အဖြစ်အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နေထိုင်မှု ပုံစံ နဲ့ အိမ်တွင်း ကုထုံးတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ။
မိဘတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အကူအညီကို ယူပြီး ဝမ်းဗိုက်မိုင်ဂရိန်းကို ကလေးက ဘာကြောင့်ခံစားနေရတယ် ဆိုတာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့ အချိန်နဲ့ နေ့စွဲ၊ စားထားတဲ့ အစားအသောက်၊ ဝေဒနာ မခံစားရခင် ဘာလုပ်နေသလဲ၊ ဆေးတွေသောက်ထားသေးလား၊ သူ့ စိတ်ကို ပူပန်သောက ဖြစ်စေမယ့် အရာတွေ ရှိသလား စတာတွေကို မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အစားအသောက်ကြောင့် ဖြစ်တာဆိုရင် အဲ့ဒီအစားအစာကို ရှောင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါက သိပ်အများကြီး အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
အမျှင်ဓါတ်အများကြီးပါတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်တာ၊ စိတ်ခံစားမှု နဲ့ ပြဿနာတွေ ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်စီမံရမယ် စတာတွေကို လမ်းညွှန်ပေးခြင်း အားဖြင့် ဝေဒနာခံစားရတာအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Abdominal Aortic Aneurysm (ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ပင်မ သွေးလွှတ်ကြော ဖောင်းလာခြင်း)
Abdominal migraines. http://www.webmd.com/migraines-headaches/abdominal-migraines-children-adults#2 . Accessed May 12, 2017.
Abdominal migraines. http://www.medicinenet.com/abdominal_migraines_in_children_and_adults/article.htm . Accessed May 12, 2017.
Abdominal migraines. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-headache/expert-answers/migraines/faq-20058268 . Accessed May 12, 2017.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 12, 2019